MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 877
>Tu Maung Nyo - We should act While we have tide and time,
>မိုးထက်နေ - ရာဇသံ
>Khaing Linn (MayGaWaddy) – Poem
> နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ် ခိုင်လင်း (မေဃ၀တီ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၀၉ ရင်မှာ ဟာလာ ဟင်းလင်းနဲ့ ကြည့်စမ်း … ခေတ် အဆက်ဆက် မျိုးဆက်သစ်တွေ ပေးဆပ်လာလိုက်ကြတာ ဘဝနဲ့ ထပ်တူ...
>changes in Chelsea
> ချယ်လ်ဆီး မန်နေဂျာ အပြောင်းအလဲ ၀င်းလက်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂ဝဝ၉ ချယ်လ်ဆီးနည်းပြ စကိုလာရီ ထုတ်ပယ်ခံရ ဘရာဇီးလူမျိုး နည်းပြ စကိုလာရီ သည် ချယ်လ်ဆီးအသင်းအား ၂၆ပွဲ မြောက် ကိုင်တွယ်ပြီး ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသည်။...
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် အမှတ် (၂၆၃) ပတ်ပျိုး၊ စောင်းကြိုး မာမာအေး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၉ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် မာအေးချစ်တဲ့ သောတရှင်တွေ ဂီတ ဝါသနာရှင်တွေ အားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး...
> မန်းဝင်းမောင် အတ္ထုပတ္တိ အပိုင်း (၉) မှတ်စုမှတ်တမ်း ဖေဖေါ်ဝါရီ ၇ ရက် မြတောင် – တောရရွာသည် ဧရာဝတီမြစ်ညာဘက်ကမ်းမှာ ရှိပါတယ်။ မွန်းမတည့်မီ မြတောင်– တောရ တစ်ဖက်ကမ်းနေရာသို့ ရောက်ရှိသွားပါတယ်။...
> စင်္ကာပူနှင့် လက်ဆော့သူတဦး၏လက်ရာဓာတ်ပုံသတင်းဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၉Bras Basah လမ်း၊ စင်္ကာပူအနုပညာပြတိုက် (Singapore Art Museum) ရှေ့ရှိ တရုတ်နှစ်ကူးအတွက် အလှဆင်ထားသော အရုပ်တခု၏ နဖူးပေါ်တွင် racist ဟု ရေးခြစ်ထားသည်ကို...
> အဘ၏ အုတ်ဂူ၌ ပူဇော်ခြင်းအောင်ဝေးဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၉ (ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ် ရာပြည့် သို့) အို … ဟေမန္တညည်းသံတစသည်းထန်လှပါလား။ နှင်းမြူကြားကအဘအုတ်ဂူ၊ ညအဖြူမှာဘယ်သူ ငိုကြွေးနေတာလဲ။ ညရောင်၊ လရောင်ကြယ်ရောင် ပြိုးပြောက်၊...
> သပြေညို ဘယ်လိုမှ မသေပါ ၀င်းပေါ်မောင် ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၀၉ “မိုးရေတက်ရေ တဖွေးဖွေး ကွင်းကျယ်အဝေးဝေး။ လယ်စောင့်တဲလေး ခြေတံရှည် မိုးကုပ်အောက်မှာတည်။ ကြာနီတပွင့် ဖြူတပွင့် တဲနှင့် ပနံတင့်။ ။...
> မင်းသုဝဏ် – ၈၈ ကဗျာ ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၀၉ ပြန်လည်ဆန်းသစ် မော်ကွန်းကဗျာ No tags for this post. Related posts No related...
> ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ပေးတဲ့ အကယ်ဒမီ၊ မိန်းမတွေကို ပေးဖို့ ဟုတ်ဘူး …မိုင်အကယ်ဒမီစိန်ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၀၉ အကယ်ဒမီတွေပေးတယ် ဆိုတော့ လူတိုင်း၊ ပရိသတ်တိုင်း စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ကြတယ်ပေါ့။ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ရမယ်ဆိုတာကလည်း အပြင်မှာ နံမည်ကြီးတဲ့...
> နှစ်စဉ် ကျင်းပမြဲ လတပို့တွဲ ရွှေတိဂုံ ထမနဲပွဲ ရဟန်းရှင်လူတို့ ဆင်နွှဲ မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၀၉ ယနေ့ကျရောက်မည့် တပို့တွဲလပြည့်တွင် ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြမည့် ရွှေတိဂုံစေတီတော် ထမနဲအလှူပွဲတော်အတွက် ယမန်နေ့က...
> (Photo: Weltenwanderer) အိန္ဒိယမှ ရွှေတိဂုံ ဓာတ်ပုံသတင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၀၉အိန္ဒိယနိုင်ငံ စီးပွားရေးမြို့တော် မွမ်ဘိုင်း (ဘုံဘေမြို့တော်) တွင် ယနေ့ ပြုလုပ်သည့် ကမ္ဘာ့ဝိပဿနာစေတီတော်ကြီး ထီးတော်တင် အခမ်းအနားမှ သံဃာများ။...
> ကိုဗဟိန်းမှသည် ကျော်ကိုကိုအထိ (၄)‘၁၉၃၆ ဒုတိယ တက္ကသိုလ်သပိတ်’အောင်ဝေးဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၀၉ ပထမ တက္ကသိုလ် သပိတ်ကြီး ပြီးလို့ (၁ဝ)နှစ် အကြာ ၁၉၃ဝ ဒီဇင်ဘာမှာ လယ်သမားသူပုန် ဂဠုန် တော်လှန်ရေးကြီး...
> နှစ်သစ်ကူး နှုတ်ခွန်းဆက် စီးပွားပျက်ကပ်ထဲမှာ မိုးမခကို ထားရစ်ခဲ့ မောင်ရစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၀၉ ဇန်န၀ါရီ စကားကို ပရိသတ်ကြီးဆီ ဦးတည်ပြီး ရေးလိုက်ပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူးမှာ ဆုမွန်ကောင်း မတောင်းပေးရသေးဘူး။ ပြည်တွင်းရေးတွေ...
> အကျင့်လေး တခု မိုးချိုသင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၀၉ လူတွေများ စကားပြောရင် ပုံစံအမျိုးမျိုး။ တချို့က ဖြေးဖြေးမှန်မှန် အသေအချာ စဉ်းစားပြီးတော့ ပြောတတ်တယ်။ တချို့ကတော့ အားတက်သရော မြန်မြန်ဆန်ဆန်။ တချို့ကတော့...
> မြန်မာပြည်က ဂျာနယ်နဲ့ အကယ်ဒမီ ကိုရီးယားမှာ လုပ်သည် မိုးမခ ၀င်း ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၀၉ ဂျာနယ်တွေ ဂျာနယ်တွေ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ဂျာနယ်တွေ အခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲလို့ လေ့လာကြည့်မိတယ်။ ထွက်နေတဲ့ ဂျာနယ်တွေက...
> မုန့်ဟင်းခါးစားခြင်းအနုပညာ ဇာနည်ဝင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်မှာ ပေါများတာ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်။ ရန်ကုန်ကို အထင်ကြီးတဲ့ထဲမှာ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်တွေ ပေါတာလည်း တချက် အပါအ၀င်...
> ၂၀၀၇ ရုပ်ရှင်များအတွက် အကယ်ဒမီဆုများ ယနေ့ပေးအပ်မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၀၀၆ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၀၉အကယ်ဒမီဆုကို ပြုံးရွှင်စွာ လက်ခံရယူနေသော ကျော်ရဲအောင် ၅၆ ကြိမ်မြောက် အကယ်ဒမီဆု (ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု) များ ပေးအပ်ပွဲကို ယနေ့ညနေပိုင်းက...
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစ ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၀၉ မြရိပ်ညို ဟိုတယ်ကို ဈေးပြိုင်ချရောင်းမည်။ အကြွေးမပေးနိုင်သည့် ဂိုးလ်ဒင်းဆွမ်း အဆောက်အဦ စည်ပင်က သိမ်းမည်။ ငွေဆောင်ကမ်းခြေ...
> စာအုပ် အဖွဲ့အနွဲ့ သစ်ကောင်းအိမ် ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၀၉ အနာပေါ် ဆေးလိပ်မီးပွား ခါချသလို နေ့စွဲတွေ ကျရောက်နေပုံ တဖွားဖွား စကားလုံးတွေ လူကြားကောင်းတယ် အဖြစ်အပျက်တွေ လူကြားမကောင်းဘူး နေစောင်းလည်း မွန်းတည့်ကောင်းတုံး...
> အမေကြားသိ အားရှိပါစေအရှင်ဉာဏိကဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၀၉ ဒကာမကြီး ဒေါ်ခင်ခင်လှ အ လ က (၄) ဆရာတော် ရဝေနွယ် (အင်းမ) နဲ့ ပေးလိုက်တဲ့ ဒကာမကြီးရဲ့ စာကို ဖတ်ရတယ်။...
> အကျဉ်းသားများ စာရင်းကို စစ်အစိုးရထောက်လှမ်းရေးက ပြန်လည်ကောက်ခံ မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်) ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၀၉ ပြည်တွင်းက ဝေးလံတဲ့ ဒေသများက အကျဉ်းထောင်များအနှံ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ပြောင်းရွှေ့ချုပ်နှောင်ခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာပိုင်များက ၎င်းတို့ရဲ့...
> အင်န်အယ်ဒီပါတီလူငယ်များ မင်းသုဝဏ် ရာပြည့် စာဖတ်ဝိုင်းဖြင့် ဂုဏ်ပြု မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်) ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၀၉ ယမန်နေ့က ပါတီဌာနချုပ်မှာ လူငယ်များက စာဖတ်ဝိုင်းပြုလုပ်ပြီး မြန်မာစာပေလောကရဲ့ ရှေ့ဆောင်၊ အမျိုးသားစာဆိုကြီးနဲ့...
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစ ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၀၉ စာမူအဟောင်းကို ဘက်ဒိတ်နဲ့ ပြန်တင်တာပါ။ သတင်းခေါင်းစဉ် စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေက ဒီလို – တခါသုံး ဖုန်းကဒ်များထက်...
> မင်းသုဝဏ် – ပန်းသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၀၉ ပြန်လည်ဆန်းသစ် ကဗျာ သရုပ်ဖော် – အင်တာနက်မြန်မာပြက္ခဒိန် ဒီမှာ ရယူပါ No tags for this post....
> I Paper သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်ရာ ၀က်ဆိုက် Scribd တင့်လွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၀၉ အင်တာနက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တဦးနဲ့ တဦးမသိကြပေမယ့် ကိုယ်မှာရှိတဲ့ သတင်း၊ စာတမ်း...
> ဒုက္ခရောက်သူများ မြန်မာပြည်တွင် ပြုလုပ်သည်ဒီအောင်ခင်ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၀၉ “လူတွေ ရွာလုံးကျွတ် ထွက်ပြေးနေရတယ်” ဆိုတဲ့သတင်းကို ဖတ်လိုက်ရင် “ဟုတ်ပါ့မလား၊ ဘာကြောင့် ပြေးရတာလဲ” လို့ မေးချင်သူများ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ရွာလုံးကျွတ်...
> ရွှေလိုဝင်းတဲ့ မင်းသုဝဏ် ဓာတ်ပုံအယ်ဘန် မင်းသုဝဏ် ရာပြည့် အမှတ်တရ ကြည့်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၀၉ No tags for this post. Related...
> ရွှေဝါရောင် စက်တင်ဘာ တေးဂီတ အဖွဲ့ သီချင်းသစ် ထုတ်ပြန် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ညီညွတ်ရေး တေးသံ ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၀၉ ဒီနေရာမှာ နားဆင်နိုင်ပါပြီ။ လက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ဝေပေးတော်မူကြပါ။ No tags...
> ကိုယ်စား သစ်ကောင်းအိမ် ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၀၉ ဒီတဆောင်း လွန်ရင် ပိတောက်နဲ့ မဝေးတော့ဘူး …. ဒီတပေါင်းမှာ ဒေါင်းတွန်သံများ ကြားရပါစေသား။ ။ (၂၆.၁. ၂၀၀၈) သရုပ်ဖော်ပုံ –...
> စီးပွားပျက်ရာ ထန်းလက်နဲ့ကာ မောင်ရစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၀၉ အမေရိကန်နဲ့ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာ စီးပွားပျက်ကပ်ဆိုက် (သကဲ့သို့) နေချိန်မှာ အစိုးရတွေသာမက လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေက အရေးယူ စီမံချက်တွေ ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံး...
Page 877 of 944«1...875876877878879...944»